भिडियो: स्लाइडरकेट बीटा चाँडै आउँदैछ! | Martech Zone
मङ्गलबार, जुन 17, 2008 मङ्गलबार, जुन 17, 2008 Douglas Karr
यदि तपाईं मार्फत क्लिक गर्नुहोस् भिडियो नदेखाउनुहोस्.
अंश: तपाईले माइक्रोसफ्टको पावरपोइन्ट देख्नुभयो। तर तपाईंले अहिले सम्म कहिल्यै इन्टरनेट सक्षम गरिएको, सहयोगी प्रस्तुतीकरण उपकरण जस्तै स्लाइडरकेट - अहिलेसम्म देख्नु भएन। यहाँ मिच ग्रासो, सीईओ र संस्थापक, हामीलाई स्लाइडरकेट कम्पनीको बारेमा बताउँछ र हामीलाई डेमो देखाउँदछ।
स्लाइडरकेट चाँडै नै सार्वजनिक बिटाको लागि तयारी गर्दैछ, आज साइन अप गर्नुहोस्।
टैग: सिनेमाइईमेल नयाँ वर्ष रणनीतिकार्यक्रम पदोन्नतीसम्बन्ध मार्केटिंग4टोर्बिटtorbit अंतर्दृष्टि
कम्पनीहरु आन्तरिक सामाजिक नेटवर्क को लागी
जुन 17, 2008 मा 12: 16 PM
स्लाइडरोकेट अभूतपूर्व हो। भोलि एउटा सम्मेलनमा स्लाइडरकेटबाट २ प्रस्तुतीकरणहरू दिदैछु। यसले मलाई अनलाइन उदाहरणहरू र स्लाइडहरू बिच सजीलो बीच बाउन्स गर्न अनुमति दिनेछ। (निस्सन्देह, मसँग मेरो जीमेलमा .pdf ब्याकअप छ र सुरक्षित हुन फ्ल्यास ड्राइभमा! वेबसाइटहरू जहिले पनि विश्वास गर्न सक्दिन ...।)
म सायद स्लाइड रकेट लिंक मेरो ब्लगमा पोस्ट गर्दैछु पछि हप्ताको पछि प्रस्तुतीकरणहरू पछि। धेरै स्वच्छ इन्टरफेस।